ရက္ခိုင့် တပ်မတော်က ပလက်ဝကို ရခိုင်ပိုင်နက်နယ်မြေလို့ ပြောဆို စတဲ့ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် မနက်ခင်း သိသင့်တဲ့ သတင်းတွေ - BBC News မြန်မာ
ရက္ခိုင့် တပ်မတော်က ပလက်ဝကို ရခိုင်ပိုင်နက်နယ်မြေလို့ ပြောဆို စတဲ့ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် မနက်ခင်း သိသင့်တဲ့ သတင်းတွေ
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် Ai John Chin Lwin
Image caption ပလက်ဝဒေသ တနေရာ
(၁) ပလက်ဝကို ရခိုင်ပိုင်နက်နယ်မြေလို့ ပြောဆိုမှုအပေါ် လက်မခံ
ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝကို ရခိုင်ပိုင်နက်နယ်မြေလို့ ရက္ခိုင့် တပ်မတော်(အေအေ)ရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ဒေသခံ ခူမီးချင်းလူမျိုး ရွာသားတွေ စိုးရိမ်ပူပန် နေကြပါတယ်။
ပလက်ဝမြို့နယ်ထဲက အောက်ပလိုင်ရွာနဲ့ အနီးတဝိုက် ခူမီးရွာတွေနားမှာ ရက္ခိုင့် တပ်မတော် (အေအေ) တပ်တွေ သွားလာလှုပ်ရှားနေပြီး၊ အေအေနဲ့ အစိုးရစစ်တပ် အကြား တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ ဒေသခံ ရွာသားတွေက ပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ နေရာနားက ရွာတွေဟာ ခူမီးချင်းလူမျိုးတွေ နေထိုင်တဲ့ ရွာတွေ ဖြစ်တဲ့အပြင် တချို့ ရွာတွေမှာ အေအေတပ်ဖွဲ့တွေက ဝင်ရောက်လာပြီး ရခိုင်ပိုင်နက် နယ်မြေ ဖြစ်တာကြောင့် တော်လှန်ရေး ပြီးဆုံးချိန် ပလက်ဝနယ်မြေကို ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲ ပေါင်းထည့်မယ်လို့ ပြောဆိုနေတာကို ကြားသိရတယ်လို့ သူတို့တွေက ပြောပါတယ်။
ရက္ခိုင့် တပ်မတော်(အေအေ) ဟာ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အုပ်ချူပ်ခွင့်ကိုလည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ဒီလိုပြောဆိုမှု အပေါ် ခူမီးအမျိုးသားပါတီက ဇန်နဝါရီ၂၄ ရက်မှာ သဘောထား ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ခူမီးပါတီ အလုပ်အမှုဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အွေ့ဟွေ့လူးက ပလက်ဝဟာ သီးခြား ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေ ဘာသာစကားနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ရှိတဲ့အတွက် ရခိုင်နယ်မြေ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ပလက်ဝမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ရခိုင်ရွာတချို့ဟာ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် နေရတာတွေ ရှိနေသလို တချို့ ရွာသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့ နေရာတွေကို ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ကြတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
Image caption တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တရုတ် အာရှရေးအရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Guoxiang
(၂) တရုတ်နိုင်ငံ အာရှရေးအရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံ
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အာရှရေးအရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Guoxiang ဟာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်က တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် အဲဒီလို တွေ့ဆုံရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိဖို့ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော် ဆောင်ရွက်နေရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံက ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးနေမှု အခြေအနေ၊ တပ်မတော်ရဲ့ စစ်တိုင်းကြီး ဒေသ ၅ ခုမှာ အပစ်ရပ်ထားတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို တရုတ်နိုင်ငံက ထောက်ခံကြောင်း စတာတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ တပ်မတော်ဘက်က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲ အစိုးရ တပ်မတော်နဲ့ ရခိုင်တပ်မတော်(အေအေ) တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ တရုတ် အထူးကိုယ်စားလှယ်က တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ လာရောက် တွေ့ဆုံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမတွေ့ဆုံခင် တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာ တရုတ်- မြန်မာ နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့လည်း တဖွဲ့ခြင်းဆီ တွေ့ဆုံပြီး တပ်မတော်နဲ့ ရခိုင်တပ်မတော်(အေအေ) အကြား တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အခြေအနေတွေကို မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တရုတ် အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နောက်တနေ့မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင်က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ ကော်မရှင်ဘက်က ပြောပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲကိစ္စကို အခုလိုစိတ် ဝင်စားမူ့ရှိနေတာက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမူ့တွေ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိနေလို့ ဖြစ်တယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် လေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေက ပြောပါတယ်။
တရုတ် အထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ ရခိုင်တပ်မတော် (အေအေ)အဖွဲ အကြား ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဖြေရှာနိုင်ဖို့ အရေးပါတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို လိုက်လံတွေ ဆုံနေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ လေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေက ပြောပါတယ်။
Image caption သန်းကြွယ်သူဌေး ပရဟိတသမား ဂျော့ဆိုးရောစ့်
(၃) တရုတ်သမ္မတဟာ လွတ်လပ်တဲ့လူမှုအသိုက်အဝန်းအတွက် အန္တရာယ်အကြီးဆုံးလူလို့ သန်းကြွယ်သူဌေး ဂျော့ဆိုးရောစ့်ပြော
ရှီကျင့်ပင်ဟာ လွတ်လပ်တဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းအတွက် အန္တရာယ်အကြီးဆုံးလူလို့ သန်းကြွယ်သူဌေး ပရဟိတသမား ဂျော့ဆိုးရောစ့်က ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်မှာ မိန့်ခွန်း ပြောဆိုရာမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်ဟာ ကမ္ဘာမှာ အာဏာရှင်စနစ် ကျင့်သုံးနေတဲ့ တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံ မဟုတ်ပေမယ့် တရုတ်ရဲ့ ကြွယ်ဝမှု၊ ခိုင်မာမှုနဲ့ နည်းပညာတို့မှာတော့ ရှေ့အရောက်ဆုံး ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း မစ္စတာ ဆိုးရော့စ်က ပြောပါတယ်။
ဉာဏ်ရည်တုနဲ့ ကွန်ပြူတာ သိမှတ်နည်းပညာတွေကို တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ထိန်းချုပ်ဖို့ အသုံးချ နိုင်တယ်လို့လည်း သူက သတိပေးပါတယ်။
ဒီလို ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေဟာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အန္တရာယ် ဖြစ်တယ်လို့လည်း မစ္စတာဆိုးရော့စ်က ပြောပါတယ်။
အဲဒီလို မဖြစ်လာအောင် လုပ်နိုင်ဖို့ အဓိက မျှော်လင့်ချက်ဟာ တရုတ်ပြည်သူတွေ ဖြစ်တယ်လို့လည်း မစ္စတာဆိုးရော့စ်က ပြောပါတယ်။
Image caption အမေရိကန်နဲ့ ဗင်နီဇွဲလား နိုင်ငံအကြား သံတမန်ရေး တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်
(၄) အမေရိကန်နဲ့ ဗင်နီဇွဲလား နိုင်ငံအကြား သံတမန်ရေး တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်
ဗင်နီဇွဲလား အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်၊ အမျိုးသား ညီလာခံဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်တဲ့ Juan Guaido ကို ယာယီ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အမေရိကန်က အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး တစ်ရက်အကြာမှာ အမေရိကန်နဲ့ ဗင်နီဇွဲလား နိုင်ငံအကြား သံတမန်ရေး တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
အတိုက်အခံကို အမေရိကန်က အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာကို ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတမာဒူရိုက ဒေါသဖြစ်နေတာပါ။
ဗင်နီဇွဲလားကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံထဲက သူ့ရဲ့သံတမန်ရေး လုပ်ငန်းတွေ အားလုံးကို ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ ပြောပါတယ်။
ဝါရှင်တန်ဘက်ကလည်း အရေးပေါ်လိုတဲ့ ဝန်ထမ်းကလွဲလို့ ကျန်ဝန်ထမ်းတွေ အားလုံးကို ဗင်နီဇွဲလား နိုင်ငံထဲကနေ ထွက်ခွာဖို့ အမိန့်ထုတ် တုံ့ပြန်ခဲ့သလို အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ အားလုံး ဗင်နီဇွဲလား နိုင်ငံထဲကနေ ထွက်ခွာဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
သမ္မတ ထရမ့်ရဲ့လုံခြုံရေး အကြံပေး ဂျွန်ဘော်လ်တန် ကလည်း သမ္မတ မာဒူရိုအစိုးရဆီ ရောက်နေတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကို ယာယီခေါင်း ဆောင် Juan Guaido ဆီ ရောက်အောင်လုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်အထိ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂ အပါအဝင် နိုင်ငံတစ်ချို့က အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ကို ထောက်ခံနေဆဲပါ။ ဒါပေမဲ့ ဗင်နီဇွဲလား အစိုးရတပ်တွေကတော့ သမ္မတ မာဒူရိုကို သစ္စာခံနေကြဆဲပါ။
16 နိုဝင်ဘာ 2018